I-CesiumJS: Umtapo Wezincwadi Womthombo Ovulekile weMephu ye-3D | Kusuka kuLinux
Izolo, sishicilele udaba olubizwa ngokuthi "I-GeoFS: Umdlalo wokulingisa wasemoyeni ovela kusiphequluli usebenzisa i-Cesium", lapho sisho khona okokuqala I-Cesium, futhi ikakhulukazi uku I-CesiumJS, lapho isho ukuthi isetshenziswe ngu I-GeoFS, ngokuba ubuchwepheshe obuvulekile bomthombo obusetshenziselwa ukunikeza ukwakheka kwangaphakathi komhlaba okubonwa abadlali.
Ukucaphuna Iwebhusayithi esemthethweni yeCesium cishe I-CesiumJS, Ikona:
Note: Kuyafaneleka ukucacisa ukuthi, I-Cesium iyinhlangano yangasese neyohwebo, ngenkathi I-CesiumJS ubuchwepheshe obuvulekile benziwa futhi busetshenziswe.
1 I-CesiumJS: Umtapo Wezincwadi Womthombo Ovulekile
1.1 Yini i-CesiumJS?
I-CesiumJS: Umtapo Wezincwadi Womthombo Ovulekile
Ngokusho kwe- Isiza esisemthethweni seCesiumJS kuGitHub, I-CesiumJS es:
Ngaphezu kwalokho, ukwakhiwa ngaphansi amazinga avulekile, I-CesiumJS ungumnikazi futhi unikezela nge ukusebenzisana okuqinile, okukuvumela ukuthi kusizakale izinhlelo eziningi, nakho okuzuzisa izigidi zabasebenzisi. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi, I-CesiumJS ikhishwa ngaphansi kwe- Ilayisense le-Apache 2.0, okwenza ikwazi ukusebenziselwa ukuhweba nokungeyona eyentengiso.
Abathuthukisi bayo bathi:
"I-CesiumJS yakhiwe ngokunakekela; Ikhodi ibuyekezwa obala kontanga, iyunithi ihlolwe ngokufakwa kwekhodi engaphezu kuka-90%, futhi ihlaziywe ngokwezibalo, ibhalwe phansi futhi yathuthukiswa yithimba elinolwazi".
Okube inqubo ezuzisayo evumele ukufeza, lokho I-CesiumJS unethuba lokunikeza izici ezibalulekile nezibalulekile noma ukusebenza, kwimikhiqizo esetshenziswa kuyo, njenge:
Idizayini yamaPhaneli e-3D ukudlulisa, ukuklama nokuxhumana nedatha eyindida ye-3D, kufaka phakathi amamodeli we-photogrammetry, izakhiwo ze-3D, izinto zangaphandle nezangaphakathi i-CAD ne-BIM, kanye namafu okukhomba.
Ikhono lokwenza izinhlobo eziningi zamajometri, kufaka phakathi ama-polylines, ama-polygoni, amabhodi okukhangisa, amalebula, ukukhishwa, nabagijimi.
Ikhono lokwenza anhlobonhlobo yemiphumela yokubuka efana nale: Izithunzi, kufaka phakathi izithunzi zakho nezithunzi ezithambile ngokususelwa endaweni lapho ilanga likhona; Umkhathi, inkungu, ilanga, ukukhanya okuvela elangeni, enyangeni, ezinkanyezini nasemanzini; nemiphumela yohlelo lwezinhlayiyana ezifana nentuthu, umlilo, nezinhlansi.
Ikhono lokudweba izingqimba zesithombe usebenzisa amazinga we-WMS, TMS, OpenStreetMaps, Bing ne-Esri.
Ukusebenzisana namafomethi we-vector, okuyizinga lemboni endaweni, njenge-KML, GeoJSON neTopoJSON.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-CesiumJS: Umtapo Wezincwadi Womthombo Ovulekile weMephu ye-3D
I-Dendrite, iseva yokuxhumana nokusetshenziswa kweprotocol ye-Matrix